Roobab Dabeylo Watay oo Khasaare Geystay oo Ka Da’ay Dhuusamareeb – Goobjoog News
Roobab Dabeylo wata oo ka da’ay Magaalada Dhusamareb ayaa Sababay khasaare isugu jira Barakac iyo Guryo dumay waxaana Daadadku ay go’adoomiyeen Xaafado ka mid ah Magaalada sidoo kale waxaa hakad uu ku yimid isu socodka Gaadiidka iyo Dadka.
Maamulka Magaalada Dhusamareb ayaa ku howlan sidii wax looga qaban lahaa Daadaka Magaalada ku soo rogmaday iyo saameynta uu ku yeeshay dadka danyarta ah.
Gudoomiyaha Magaalada Dhusamareeb Cabdiraxmaan Cali Maxamed Geeda-qoroow oo Warbaahinta kula hadlay Martamaha Magaalada ayaa Faafaahin ka bixiyey Saamaynta Roobabkani ku yeesheen Magaalada iyo Qasaarihii ay gaysteen Roobabkii hore waxa uuna xusay in loo baahan yahay in loo gurmado Dadka Roobabku saameeyeen.
Roobabkaan oo Dabaylo watay ayaa Xalay aad uga da’ay Deegaano ka tirsan Gobolka waxaana jirta Saamayn ka dhalatay iyadoo ay jiraan dadaalo wax looga qabanayo .
Madaxwaynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye (Qoor-Qoor) ayaa Magacaabay Guddiga Gurmadka Fatahaadaha kuwaasi oo ka shaqeyn doono qiimeynta saameynta ka dhalatay roobabkii da’ay iyo sida wax looga qaban lahaa dadka uu saameeyay.
Milkiilaha Diyaaradda Ku Burburtay Bardaale oo Goobjoog uga Warramay Sida Ay Wax U Dhaceen